Telemetry mu software Chii icho uye chii chainoshandiswa? | Linux Vakapindwa muropa
Mukumuka kwe gakava Nekuda kwekuisirwa kwetelemetry chishandiso mu Audacitiy, zvakaitika kwandiri kuti zvingave zvinonakidzae kunyatsoziva zvazviri uye basa rayo. Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti haisi nguva yekutanga kuti nyaya yakadzikiswa. Izvo zvakange zvatoitika neVS Code, Microsoft kodhi mupepeti Uye, kunyangwe isiri chaiyo telemetry, ine dhata iyo Unity, iyo Ubuntu desktop, yakaunganidzwa kuratidza mhinduro dzakakodzera kubva kuAmazon
1 Telemetry mu software Chii icho?
1.1 Software telemetry maficha
Telemetry mu software Chii icho?
Zvishandiso zve telemetry suye ivo vari mukutarisira kwekutevera, kunyoresa nekutarisa zvigadzirwa nekucherechedza uye kuongorora zviitiko zvinogadzirwa nehurongwa.
Mune mamiriro ezvinhu akaomarara masisitimu (kana vashandisi vazhinji vanomhanyisa chirongwa pamakomputa ane hunhu hwakasiyana telemetry inopa ruzivo rwakakosha kune vanogadzira uye vanochengetedza izvo vashandisi havawanzo kutaura.ar. Telemetry maturusi anoitirwa unganidza, shandura, uye taurirana data pane mashandiro ehurongwa, mashandiro, kumhanyisa kumhanyisa, zvikanganiso, uye zviitiko zvekuchengetedza yekugadzira. Vanogona kuuya nenzira dzakasiyana siyana, kubva kumatanda epakati kusvika pakuteedzera dhata kutsvaga kuburikidza nema microservices.
Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti seizvo chivakamberi tele chinoratidza, kutaura nezve telemetry mune software, iyo data inofanirwa kutumirwa kumwe kunhu, haisi nyore rekodhi rekodhi yezviitiko.
Software telemetry maficha
Mashandisiro ekushandisa: Pimisa kuti sei, riini uye zvakadii chigadzirwa chinoshandiswa. Izvo zvakagadzirirwa kuitirwa chikamu chebhizimusi chemugadziri sezvo vachitendera iwe kuyera kuvimbika kwevatengi uye kubudirira kwechigadzirwa.
Dambudziko rekuona uye kuongororwa: Telemetry inoshandiswa kure kure kuona kushanda kwechirongwa kuti unzwisise, kugadzirisa uye kudzivirira matambudziko.
Dhizaini dhizaini yekusimbisa: Zvinozivikanwa kuti mapoka ekutarisa haisi nguva dzose yakanaka nzira yekuongorora chigadzirwa kubva vashandisi, vachiziva kuti vari kutariswa, havaite sezvavangaite mune chaiyo mamiriro. Vachishandisa telemetry, vanogadzira vanogona kuziva kana sarudzo dzekugadzira dzaive dzechokwadi sezvo vachigamuchira ruzivo pasina mushandisi achiziva.
Izvi zvese zvinonzwika kunge zvisingaite, kunyangwe kune mirau yakaoma yekuti data iro rinofanira kurapwa sei. Ndokusaka, kunyangwe zvichishungurudza sei, iwe unofanirwa kuverenga iro rakakurumbira End User Use License.
Kazhinji, iyo telemetry maitiro inove nematanho mashanu
Kugadzwa kwemetriki: Metric chiyero chekuita, semuenzaniso iyo nguva yekushandisa isina zvikanganiso. Rakareruka dhata rekuunganidza harina musoro kana isu tisingazive zvatiri kufarira uye nezvatinoda kuti zvive. Kazhinji, pekutanga ipfungwa (semuenzaniso kuti chirongwa chinogona kumhanyisa anopfuura maawa zana pasina zvikanganiso), nzira yechiito inosimbiswa kana fungidziro ikasimbiswa kana kurambwa uye nguva yechokwadi yakaiswa metric. Metric inogona kuve mhedzisiro yekubatanidza maviri kana anopfuura data uchishandisa fomula.
Izvinyorwa: Muchikamu chino, zvinotsanangurwa kuti ndeipi dhata inoenderana nekuona metric uye kuti ichawanikwa sei nekutapurirana.
Kutapurirana kwedata uye kuchengetedza: Zvese zviri zviviri kuzadzikiswa kwezvinodiwa zviri pamutemo uye zvekuchengetedzwa kwemutengi, zvinodikanwa kuti utarise kuti sei uye nenzira ipi iyo data richaparadzirwa. Semuenzaniso, kana isu tiri kuteedzera mobile application, mutengi haazofarire data kutumirwa yega maminetsi mashanu vachishandisa yavo data data. Chinhu chakanakisa kuita kungave kuunganidza ivo munharaunda uye kumirira kuti mudziyo ubatanidzwe kune Wifi network. Zvinogona zvakare kuve nyore kuvanyora usati watumira kana kudzima ruzivo rwunobvumira kuzivikanwa kwemutengi. Kana iyo data yagamuchirwa, iwe unofanirwa kusarudza maitiro ekuichengeta. Pfungwa yakanaka ndeyekuenzanisira izvo zvinoderedza huwandu kuti uchengetedze.
Kutongwa: Mune ino nhanho, iyo data inosanganisirwa kuwana iyo ruzivo iyo ichave inobatsira mukuita sarudzo.
Kuongorora: Mune ino nhanho, iyo ruzivo rwunowanikwa kubva mukugadziriswa kwedata rakawanikwa inoongororwa uye ichienzaniswa neyekufungidzira kwakagadzirwa pakutanga kwenzira. Yemberi makosi ekuita anotsanangurwa pazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Telemetry mu software Chii icho uye chii chainoshandiswa?
Zvakanaka, yaive nguva. Yakanaka chinyorwa, ino inguva yekutanga pandinoona yakanaka chinyorwa chako, zvese apa uye pane yako yekare uye inosiririsa yega blog. Iwe urikutora zororo racho, zvakanaka.
Pindura kune Zvakanaka
Linux Mint 20.2 ikozvino yave kuwanikwa neCinnamon 5, Bulky uye zvimwe zvinowedzera